sary sehatra 1: 0.5 1 2 3 4 5 6 8 10
Length ny fizarana Y
Roll halavan'ny A
Roll sakan'ny B
Roll lanja V
Ny vola lany ny bozaka ho an'ny 1 horonam-boky
Work 1 horonam-boky
Y - Length ny fizarana
X - Ny sakan'ny ny faritra
A - Roll halavan'ny
B - Roll sakan'ny
C - sisiny, nomena ho toy ny isan-jato
V - lanjan'ny horonam-boky iray, amin'ny kilao
Mifidy ny fitarihan'ny stacking ny aseho ao amin'ny sary.
Mba manao kajy ny vola lany, dia afaka mamaritra horonan-taratasy isan-vidin'ny sy ny vola avy amin'ny asa ho an'ny stowage.
Mamorona ny toerana malama tsara tarehy fanampiana bozaka maoderina sy ny aina Rolling bozaka. Izy io dia herbaceous fonony, izay amidy amin'ny horonana turf amin'ny napetraka ao aminy ny voan'ny turf ahitra.
Araka ny mahazatra, dia nanakodia mpivarotra bozaka, ary manolotra fanampiana eo amin'ny styling. Fa, manana fahalalana ny sasany, dia afaka manao ny asa ny tenanao.
Dia hanao kajy ny fandaharana firy horonana ny bozaka no ilaina mba hamoronana ny ahi-malama fonony noho ny toerana manontolo. Rehetra tokony ho fantatrao fa izany no haben 'ny toerana sy ny horonam-boky iray ny turf ahitra, sy ny isan-jaton'ny tahiry mitaky anao. Miaraka vaovao io, dia afaka mora foana hanao kajy ilay isa horonana izay no ilaina, ary azo inoana fa ny vola. Rehefa afaka izany, izay rehetra tsy maintsy atao dia ny hividy ka ataovy ny bozaka tao amin'ny saha na eo amin'ny bozaka anoloana.
Zaridaina ny tanana - mora izany.
Mariho fa ny isan-jaton'ny tokony ho ny tahiry ho an'ny 5 isan-jato sy 10 tetika mahazatra ho an'ny voninkazo ny faritra tamin'ny fandriana, voninkazo fandriana na zaridaina lalana.
Alohan'ny ny fametrahan ny bozaka, ny toerana dia tsy maintsy ho vonona. Koa satria ilaina mba hanala rehetra potipoti-javatra, vato, manala ahi-dratsy. Ny tany dia tsy maintsy hiatrehana zavatra simika manokana sy ny mampifanaraka ny toetrantsika. Nandamina nalatsa-taorian'izay. Amin'ny faran'ny ny fanomanana ny bozaka dingana faritra Feno tany lonaka, ary ny farany herinandro alohan'ny nametraka lonaka. Alohan'ny nametraka ny bozaka raha maina loatra ny tany, dia tokony ho moistened.
Ary ny bozaka azo nametraka. Izany dia tokony hatao, raha ela indrindra 72 ora avy ny fotoana ny bozaka no tapaka. Na, raha tsy azo atao izany, dia tokony deploy ny bozaka ao amin'ny aloky ny toerana sy ny rano izany tsindraindray mandra ny fametrahana.
Aza niisa horonana amin'ny samy mahery 4 sosona. Na dia tsara loatra bozaka contraindicated entana lehibe.
Tsarovy fa tsara ny hametraka ny bozaka amin'ny fotoana iray. Izany dia miteraka ny malamalama coating fanamiana.
Ny fotoana tsara indrindra nametraka turf dia heverina ny fiandohan'ny lohataona ny fahalavoana na. Fa zava-dehibe ny mahatsiaro fa ny tany tsy ho amin'izao fotoana ny fanjary na mando loatra.
Manomboka nametraka bozaka akaiky kokoa amin'ny tany izay miforitra ny fitehirizana. Mametraka bozaka tokony ho eo amin'ny tsipika mahitsy. Raha ilaina, mandrakotra ny toerana ny tsy fitsipika endrika, toerana sarotra mihidy manokana tapa-turf nendahina avy amin'ny tahiry.
Isaky ny laharana ny coating tokony Atomboka sy faranana amin'ny vilia feno na ampahany izay ho ny haben'ny tsy latsaky ny antsasany izany. Ny farantsa kely sisa nataony tao afovoan'ny ny andian-dahatsoratra, fa tsy any amin'ny faritra.
Rehefa vita ny tsirairay compacted andiam-bozaka. Ao ny fananganana kirihitra na depressions tokony ho nesorina turf sy mitovy tantana ny ambony ambany. Rehefa afaka izany, ny bozaka compacted indray.
Andalana izany dia apetraka amin 'ny milina hafa mikasika tsirairay, toy ny masonry. Dia zava-dehibe mba hahazoana antoka fa mafy turf takelaka ireo nanery ny olona hafa fa tsy hifanindry.
Mandeha eo vao mafana nametraka turf tsy soso-kevitra.
Rehefa avy nametraka vita dity ny fiara, dia ilaina ny mameno ny toerana eo ireo zavatra mifangaroharo tonon-taolana manokana. Ny firafitry ny fifangaroana io dia miankina amin'ny karazana tany ianao eo amin'ny toerana.
Nametraka bozaka tokony ho tsara fandatsahan-rano. Per metatra toradroa haka 15, fara fahakeliny, litatra. Nandritra ny herinandro manaraka indray mandeha isan'andro ihany koa bozaka nisotro rano ilaina.
Tokony ho iray volana tatỳ aoriana, ny ahitra dia hiara-maniry fakany ny fototry izay napetraka ao amin'ny bozaka, zaridaina, ary bozaka no ho mafy.
Taorian'ny herinandro vitsivitsy taorian'ny fametrahan ny ahitra azo notapahina. Izany dia tokony hatao manerana ny fitarihan'ny ny styling sy nanapaka afa-tsy ilay tampon'ny ny lelany. Last bozaka matetika no tapaka tamin'ny Septambra.
Tamin'ny lohataona taorian'ny tany thawed, lonaka ary mowed indray ny bozaka, fa indray, nanapaka ny toro-hevitra ihany ny lelany.
Nandritra mafana volana, manondraka ny bozaka tokony ho isaky ny 10 andro.
Toerana iombonanaDimensions ny peta-drindrintsikaGable tafoPent tafoMansard tafoHip tafoWood trussStraight tohatra eo amin'ny kofehyDirect lasely tohatraTohatra miaraka amin'ny 90 °Tohatra miaraka amin'ny 90 ° swivel, sy ny dinganaTohatra, mba hiala 180 °Tohatra mihodina ny amin'ny 180 ° sy ny milina dinganaTohatra telo spansTohatra telo spans sy ny milina dinganaSpiral tohatraMetal tohatraVy tohatra amin'ny bowstring zigzagVy tohatra miaraka amin'ny 90 °Vy tohatra miaraka amin'ny 90 ° sy ny bowstring zigzagVy tohatra amin'ny anjara-andron'i 180 °Vy tohatra mihodina ny amin'ny 180° sy ny bowstring zigzagAzo tsapain-tànana tohatraStrip fototraPier fototraFoundation slabAzo tsapain-tànana peratraPaving slabsFaritra jambaNy fikajiana ny diagonalNy firafitry ny simenitraHazoFittingsCeramic tailaGypsum plasterboardWallpapersLamba fitomboan'ny fitaovam-vy grillesWooden tranoWall fitaovanaFitaovana FloorDeckingStone FefyMetal fefyAndohalambo ny picket fefySelf-leveling rihanaVisorsTetika faritraLavakaNy boky avy amin'ny fantsakanaLavakaTurfDobo mahitsizoroTube famindram-ponenanaNy boky ny fiaraBarìka bokyNy boky ny fitoeran-javatra mahitsizoroNy habetsaky ny fasika na vatokely ao amin'ny antontan-javatraFikajiana ny fatra an-habakabaka amin'ny fantsonaEo am-pikajiana ny rano.EntonaToeplitz semicircularBuilding clampFanairana ny efitranoFitafianaTrapeze ny zoro.Andohalambo kajikajiana.Bola Calculator